HiRise ho an'ny iPhone 5 sy iPad Mini. Fanohanana famandrihana sy fampifanarahana matetika. | Vaovao IPhone
HiRise ho an'ny iPhone 5 sy iPad Mini. Fanohanana famandrihana sy fampifanarahana matetika.
Roa ambin'ny folo atsimo, orinasam-pahaizana manokana momba ny kojakoja ho an'ny Mac, iPhone ary iPad, dia namoaka fitaovana vaovao miasa ho toy ny fototra ho an'ny iPad Mini sy iPhone 5 na iPod touch 5G. Izy io dia fanohanana metaly, miaraka amina famaranana matte izay tsy mifandona velively amin'ny vokatra alimina Apple anao, ary manana hatsarana araka ny fanaovan'ilay mpanamboatra azy manokana: miasa amin'ny tranga rehetra eny an-tsena ho an'ny iPhone na iPad Mini izy. Na dia afaka miasa amin'ny iPad Retina 4 koa aza izy io, ny mpanamboatra dia tsy manome soso-kevitra ny hampiasana azy noho ny haben'ny iPad ity.
Ny mpihazona dia mampifanaraka ny tranga misy amin'ny fitaovanao. Ho an'ny zavatra iray, ny tohana aoriana dia azo soloina mba hifanaraka amin'ireo tranga matevina kokoa. Etsy ankilany, ny mpampitohy Lightning dia azo ahitsy ihany koa hahafahana mampifandray ny fitaovanao na dia amin'ireo tranga mamela ny mpampitohy lavitra indrindra avy amin'ny fotony aza. Tanteraka izany noho ny fampiasany ny tariby voalohany an'ny iPhone na iPad (tsy tafiditra), satria io no mpampitohy Lightning kely indrindra misy ankehitriny eny an-tsena. Ny valiny dia ny ahafahanao mampifandray ny iPhone na iPad Mini anao amin'ny tranga rehetra, na inona na inona ny hateviny. Mazava ho azy fa mety tsara ihany koa ho an'ny fitaovana tsy misy tranga.
Ny vidin'ity fononteny ity dia $ 34,99 avy amin'ny anao manokana pejy web. Vidiny iray izay toa marina amiko, na dia tsy maintsy apetrakao aza ny tariby fifandraisana, ny famindrana dia manana endrika mihoatra ny marina, miaraka amin'ny fitaovana avo lenta, ary miasa amin'ny fitaovana samihafa izy io. Ary ny tena zava-dehibe: tsy mila manova ny tohana ianao raha manova ny fonony, zavatra indrisy fa mitranga amin'ny vokatra mitovy aminy. Miaraka amin'ny OCDock izay nodinihintsika taloha be dia be, toa ahy ho iray amin'ireo havoana tsara indrindra azo alaina ho an'ny fitaovantsika.
Fampahalalana bebe kokoa - Famerenana ny dock ho an'ny iPhone sy iPad OCDock Mini
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » HiRise ho an'ny iPhone 5 sy iPad Mini. Fanohanana famandrihana sy fampifanarahana matetika.
Enrique Romagosa dia hoy izy:
Miaraka amin'ny ipad dia tonga lafatra izy io, tena azo ampiharina tokoa.
Valiny tamin'i Enrique Romagosa
CocoaNuts dia manomana an'i Celeste 2 hizara rakitra amin'ny alàlan'ny Bluetooth ao amin'ny iOS 6
Tsoratadidy ho an'ny WhatsApp Messenger mivantana amin'ny efijery an-trano iPhone tsy misy Jailbreak